मलाई केटीहरुले ‘प्ले ब्वाय’ बनाए - NewsPolar NewsPolar
मलाई केटीहरुले ‘प्ले ब्वाय’ बनाए
नेपाली लोकदोहोरीमा शंकर वीसी नौलो नाम होईन । आजसम्म १२ सय वढि भिडियो निर्देशन गरिसकेका शंकर अहिले सिनेमाको नृत्य निर्देशनमा पनि जम्ने क्रममा छन् । कोरस हुँदै भिडियोको निर्देशनसम्म आईपुग्दा उनले धेरै संघर्ष गरेका छन् । उनै शंकर बीसीसँग अनलाइनखबरका लागि विजय आवाजले गरेको कुराकानी :
दोहोरी भिडियोको बजार कस्तो छ ?
अहिले अडियो बिक्रि हुँदैन । यसैले पनि सिआरविटीका लागि भिडियो बनाउनुपर्ने अवस्था छ । यही कारणले पनि भिडियो बनाउनेको बजार राम्रो छ ।
तपाईको बजार कस्तो छ त ?
मैले गरेको कामलाई दर्शकले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । यसैले आजसम्म १२ सय वटा भिडियो निर्देशन गरेको छु । अडियोको बजार गएपछि भिडियोको बजार अझै राम्रो छ ।
आफै भिडियो बनाउने आफै खेल्ने, यो त आफ्नो हात जगन्नाथ भने जस्तो भएन र ?
होईन, पहिला म भिडियो निर्देशन मात्र गर्थे । तर सुपारी चाम्रो बोलको गीतमा खेलेपछि दर्शकले राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभयो । कम्पनीले पनि भिडियोमा मलाई नै खेल्नु पर्छ भन्नुहुन्छ । यसैले मात्र खेलेको हुँ । १२ सय भिडियो बनाएँ, ६ सयमा म आफै खेलेको छु ।
तपाईले निर्देशन गर्ने अधिकांश भिडियोमा मोडलको रुपमासम्झना वुढाथोकी देखिनुहुन्छ, के लभ अफेयर हो तपाईहरुको ?
हाम्रो बिचमा त्यस्तो कुनै सम्वन्ध छैन । हाम्रो जोडि हिट भएकाले सवैले हामीलाई नै खोज्नुहुन्छ । धेरैले त यि दुई विहे गरेर सागै वस्छन् समेत भन्नुभयो । तर, उनले मलाई दाई भन्छिन । हामी पर्दाको सफल जोडी मात्र हौँ ।
तपाई विवाहित कि अविवाहित ?
विवाहीत हुा । मैले ५५ सालमै विहे गरेको ।
सम्झनासँग मात्र नाच्दा श्रीमतीले के भन्नुहुन्छ, घर झगडा त खुवै पर्छ होला नी हैन ?
यहाँ कान फुक्नेहरु धेरै छन् । सुरु सुरुमा त खुवै अप्ठ्यारो पर्‍यो । पछि उसले पर्दाको जोडि मात्र हो भन्ने वुझेपछि अहिले खासै समस्या छैन ।
आजको सफलतालाई हेर्दा विगतलाई कसरी संझनुहुन्छ ?
मैले नसोचेको सफलता पाएको छु । म कोरस नाच्दै आएको केटा हुँ । आज दर्शकको माया देख्दा आफैलाई सपना जस्तो लाग्छ । मिहिनेत गर्नुपर्छ सफल भईदो रहेछ भन्ने लाग्छ ।
विहेको प्रस्ताव कति आउँछ ?
एकदमै धेरै आउाछन् । आई लभ यु भनेर फोन गर्ने युवतीहरुको संख्या धेरै छ । कतिले त तपाईको फोटो सिरानीमुनी राखेर सुत्छु समेत भन्छन् । यस्तो प्रतिक्रिया नेपाल भन्दा बाहिरबाट धेरै आउाछ । उहाँहरुलाई म विवाहित हुा भनेर सम्झाउाछु ।
गिफ्ट कत्तिको आउाछन ?
धेरै नै, विशेषगरी विदेशबाट । कपडा, चकलेट, मोवाईल आदि आउाछन् ।
सिनेमामा पनि तपाईको माग वढेको हो ?
अहिले माग वढ्दै गएको छ । लगातार २२ वटा गीतमा काम गरे मैले ।
के फरक छ दोहोरी र सिनेमाको कोरीयोग्राफिमा ?
सिनेमामा आजै सक्नुपर्छ भन्ने छैन । धेरै वजेट भएकाले काम गर्न मजाले पाईन्छ ।
पहिलो प्रेम याद छ ?
कक्षा ७ मा पढ्दा मेरो सम्वन्ध एउटीसँग जोडिएको थियो, । तर उनले मलाई मतलव गरिनन् । मैले उनलाई पोष्टकार्ड र चिठि पठाएा तर उनले मतलव गरिनन् । पछि उनको अर्कै केटासाग लभ परेको थाहा पाएँ । पछि म चर्चित भएपछि भेट भएको थियो, उनले मैले केही सोच्न सकिन भनिन् । पश्चतापजस्तै थियो ।
विहे अघि कति केटीसँग लभ गरियो ?
लभको त कुरै नगरौँ । कति भए कति । यादै छैन । एकजनासँग छुट्ने वित्तिकै अर्कोसँग भैहाल्थ्यो ।
यसोभए तपाई त प्ले व्वाई पो हुनुहुँदो रहेछ हैन ?
म प्ले व्वाई हैन । मलाई केटीहरुले नै प्ले व्वाई बनाएका हुन् । म राम्रो नाच्ने भएकाले केटीहरु पछि लागेर हैरान पार्थे । यसैले धेरैसँग लभ गरियो ।
साँचो प्रेम कतिसाग भयो ?
साँचो प्रेम त ५ जना जतिसँग भयो । अरु त बाटोमा आए, एकछिन रमाए अनि गए ।
सेक्सको पहिलो अनुभव कहिले लिनुभयो ?
ठ्याक्कै याद छैन । कलेज पढ्दा जतिवेला म १६ बर्षको थिएा ।
गाउँघरको लभमा सेक्स हुादैनथ्यो । तर, काठमाण्डौ आएपछि दुई जनाको सहमती मै आधादर्जन जतिसँग सेक्ससम्बन्ध भयो ।
लोकदोहोरी खेलाईदिनु भन्दै कति आउाछन् सेक्स प्रस्ताव ?
आए त्यस्ता प्रस्तावहरु पनि । म तपाईसँग भिडियो खेल्नका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छु भन्नेहरुलाई मैले अस्विकार गरिसकेा । किनकी उनीहरु मेरो करिअर नै वर्वाद गर्नेगरी जासुस भएर पनि आएका हुनसक्छन् जस्तो लाग्यो ।
आफैंले चाहिं दोहोरी खेलाईदिन्छु भन्दै कत्तिलाइ सेक्स प्रस्ताव गर्नुभयो ?
मैले त्यस्तो गरेको छैन् । लोकदोहोरी मा यस्तो हुादैन । एकदिनमै छायांकन सकिने भएकाले पनि हामी त्यस्तो सम्वन्धसम्म पुग्नै पाउादैनौं । सिनेमामा पो ५० दिनसम्मसागै वस्नु पर्ने हुन्छ, यसैले के-के हुन्छ हुन्छ नि ।
देख्ने वित्तिकै सेक्स गर्न मन लाग्ने महिला को हो तपाईको नजरमा ?
ऐश्वर्या राय । मेरो कोठामा उसको ठुलो फोटो थियो । विहान उठ्न वित्तिकै उसको फोटो हेर्थे र विस्तारैबाट किस गर्थे अनि मात्र फ्रेस हुन्थें ।
अहिले कसलाई देखेर हुन्छ सेक्स डिजाएर ?
अहिले सवै कुरा करिना कपुरसँग गर्न मन लाग्छ ।
जिन्दगीमा नसोचेको कोही व्यक्तिसँग भेट भएको छ ?
म पहिला क्यासिनोमा नाच्थो । त्यतिबेला भारतीय नायक गोविन्द आउनुभएको थियो । उहाँलाई भेट्ने मेरो ठुलो सपना थियो । क्यासिनोमा उहाँलाई भेट्दा सपना जस्तो लागेको थियो ।
अवको सपना के छ ?
मेरो एउटै सपना छ, सिनेमाको निर्देशन गर्ने ।
कस्तो सिनेमा बनाउन मन लागेको छ ?
मलाई एकदमै कमेडि सिनेमा बनाउने रहर छ ।